İzmit D-100 Üzerindeki Yaya Üst Geçit Asansörleri Aralıksız Temizliyor – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliIzmit D-100 Dadka lugaynaya ee Hadiyado Hadiyado Nadiifinta Joogtada ah
10 / 12 / 2019 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
Dabaqayaasha lugeeyayaasha sare ee Kocaelide waa nadiifin la'aan
Izmit D-100 Qalabka lugaynta ee xad dhaafka ah Nadiifinta Joogtada ah Nadiifinta; Xadgudubyada lugeeyayaasha iyo wiishashka dusha sare ee dariiqooyinkan ayaa ahmiyad weyn u leh gaadiidka muwaadiniinta caadiga ah iyo sidoo kale waayeelka, haweenka uurka leh iyo kuwa naafada ah. Kocaeli Metropolitan Municipal Park Garden iyo kooxaha Aagaga Aaga Green si ay muwaadiniinta uga dhigaan inay wiishku u isticmaalaan dariiqyada nadaafad dariiqyada lugeeyayaasha ee Izmit D-100 si joogto ah ayey u nadiifinaysaa.
15 Alaab dhaafiyeyaasha lugta ah 36 Hadiyado
ICE WAA FAHAN
Soo bandhigida bilaha jiilaalka iyo kororka roobka, Xirmooyinka habeenkii ayaa ku dhici kara xad dhaafka. Qeybaha Beeraha Beerta iyo Beeraha Cagaaran kuwaas oo tixgeliya tan, iyo sidoo kale nadiifinta wiishashka wiishashka ee ka hortagga shaqeynta hawadu. Kooxuhu waxay ku daadiyaan xalka dareeraha dhulka ay muwaadiniintu ku dul marayaan meelaha laga gudbo. Walxaha daadanaya, barafka ayaa la qaboojiyaa iyo samaynta barafka ayaa laga hortagaa 24 saac.
3. nadiifinta buundada Isticmaalka degmada Sariyer
Ogeysiiska Qandaraaska: Qalabka isku-dhaafka ah waxaa loo dhisi doonaa (Derince iyo Izmit)
Buundooyinka Lugaha lugeeya ee Izmit D-100
wiishashka nadiifinta meelaha dusha ka sarreeya
Hadiyadaha lugeeya ee lugeeya